OTU ESI KPOO DISKI DISKI DISKI - IKE MBANYE - 2019
Isi Ike mbanye
Ụzọ iji jikọta akụkụ dị na disk diski
Mmemme bụ ihe okike ma na-adọrọ mmasị. Iji mepụta mmemme ọ bụghị mgbe niile ịmara asụsụ. Kedu ngwá ọrụ dị mkpa iji mepụta mmemme? Ị chọrọ ebe mmemme. Site n'enyemaka ya, a na-asụgharị iwu gị dị ka koodu ọnụọgụgụ nke nwere ike ịghọta maka kọmputa. Ma e nwere ọtụtụ asụsụ, na ọtụtụ usoro mmemme. Anyị ga-enyocha ndepụta nke mmemme maka ịmepụta mmemme.
PascalABC.NET bụ ebe mmemme na-adịghị mfe maka asụsụ Pascal. A na-ejikarị ya n'ụlọ akwụkwọ na mahadum maka ọzụzụ. Usoro ihe omume a na Russian ga-enye gị ohere ịmepụta ọrụ nke mgbagwoju anya. Onye nchịkọta akụkọ ga-enyere gị aka, onye nchịkọta akụkọ ga-egosiputa njehie. Ọ nwere oke ọsọ nke mmegbu usoro.
Uru nke iji Pascal bụ na ọ bụ mmemme mmemme. OOP dị mfe karịa usoro mmemme, ọ bụ ezie na ọ dịkwuo ọkụ.
N'ụzọ dị mwute, PascalABC.NET bụ ihe na-achọ ihe onwunwe kọmputa ma nwee ike ịtụkwasị na ígwè ọrụ ochie.
Free Pascal bụ ihe na-eme ka ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe, ọ bụghị usoro mmemme. Site na ya, ị nwere ike ịlele usoro ihe omume maka nzipụta ziri ezi, yana ịme ya. Ma i nweghi ike ichikota ya na .exe. Free Pascal nwere oke ọsọ nke egbu, nakwa dị ka a dị mfe ma na-enweghị ike interface.
Dịka na ọtụtụ mmemme yiri nke ahụ, onye nchịkọta ederede na Free Pascal nwere ike inyere onye mmemme ahụ aka site na idechaa iwu nke ya.
Mwepu ya bụ na onye nchịkọta nwere ike ikpebi ma è nwere njehie ma ọ bụ na ọ dị. Ọ naghị ahọpụta eriri nke eriri njehie ahụ, n'ihi ya onye ọrụ kwesịrị ịchọ ya n'onwe ya.
Fọrọ nke nta ka ngwá ọrụ mbụ maka ịmepụta ihe omume na kọmputa - Turbo Pascal. A na-emepụta usoro mmemme a maka usoro ọrụ DOS na ịkwesịrị ịwụnye mgbakwunye ngwanrọ iji mee ya na Windows. A na-akwado asụsụ Russian, o nwere oke ọsọ na mkpochapụ.
Turbo Pascal nwere ụdị mmasị dị otú a dị ka nyocha. Na ọnọdụ ịchọta, ị nwere ike nyochaa ọrụ nke usoro ihe omume ahụ site na nzọụkwụ ma gbasoo mgbanwe data. Nke a ga - enyere aka ịchọpụta njehie ndị siri ike ịchọta - njehie ezi uche.
Ọ bụ ezie na Turbo Pascal dị mfe ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya iji mee ihe, ma ọ bụ obere oge: kere na 1996, Turbo Pascal dị mkpa maka otu OS - DOS.
Nke a bụ ebe mmemme na Pascal. Ọdịmma enyi ya, nke a na-ejighị n'aka na-eme ka ọ dị mfe ịmepụta mmemme na ntakịrị ihe ọmụma nke asụsụ. Lazarọs fọrọ nke nta ka o kwekọọ na asụsụ mmemme Delphi.
N'adịghị ka Algorithm na HiAsm, Lazarọs ka na-amata asụsụ nke asụsụ Pascal. N'ebe a, ọ bụghị nanị na ị na-ezukọta ihe omume ahụ na nrugharị gị ntakịrị bit, ma deekwa koodu maka mmewere ọ bụla. Nke a na-enye gị ohere ịmatakwu usoro ndị na-eme na mmemme ahụ.
Lazarọs na-enye gị ohere iji usoro ntanetịime nke ị nwere ike ịrụ ọrụ na ihe oyiyi, yana ịmepụta egwuregwu.
N'ụzọ dị mwute, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị ga-achọ azịza na Intanet, ebe ọ bụ na Lazarọs enweghị akwụkwọ.
HiAsm bụ onye nrụpụta n'efu nke dị na Russian. Ịkwesighi ịma asụsụ maka ịmepụta mmemme - ebe ị na-ede ya dịka onye mmebe, ị na-ezukọta ya. Enwere otutu ihe dị ebe a, mana ị nwere ike ịgbasawanye ha site na ịwụnye tinye-ons.
N'adịghị ka Algorithm, nke a bụ ebe mmemme mmemme. Ihe niile ị ga - emepụta ga - egosipụta na ihuenyo dị ka eserese na eserese, ọ bụghị koodu. Nke a dị mfe, ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-achọ ka itinye ederede ọzọ.
HiAsm dị ike ma nwee oke ọsọ nke mmegbu usoro. Nke a dị mkpa karịsịa mgbe ị na-emepụta egwuregwu mgbe ị na-eji modul mara mma, nke na-ewelata ọrụ ahụ. Mana maka HiAsm, nke a abụghị nsogbu.
Algọridim bụ ebe e si kee ihe omume na Russian, otu n'ime mmadụ ole na ole. Ihe dị iche ya bụ na ọ na-eji ederede mmemme anya. Nke a pụtara na ị nwere ike ịmepụta usoro ihe omume na-amaghị asụsụ. Algorithm bụ onye na-ewu ihe nwere nnukwu ihe dị n'ime ya. Enwere ike ịchọta ozi na mpaghara nke ọ bụla n'ime ihe omume usoro ihe omume ahụ.
Ọzọkwa, Algorithm na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na njikwa eserese, mana ngwa iji eji eserese ga-ewe oge dị ukwuu iji wuchaa.
Na mbipute free, ị nwere ike ikpokọta ọrụ site na .alg na .exe naanị na saịtị onye mmepụta na ugboro 3 n'ụbọchị. Nke a bụ otu n'ime isi adịghị ike. Ịnwere ike ịzụta ụdị ikikere nke ikikere ma chịkọta ọrụ dị mma n'usoro ihe omume ahụ.
Ihe na-eme IntelliJ ID bụ otu n'ime ndị IDEs cross-platform. Ọnọdụ a nwere nnwere onwe n'efu, nke dị ntakịrị na onye akwụ ụgwọ. Maka ọtụtụ ndị mmemme, nsụgharị nnwere onwe zuru ezu. Ọ nwere onye nchịkọta akụkọ dị ike nke ga-agbazi njehie ma mezue koodu maka gị. Ọ bụrụ na ịmehie, gburugburu ebe obibi na-agwa gị banyere nke a ma na-atụ aro ngwọta dị mma. Nke a bụ usoro mmepe nwere ọgụgụ isi na-atụ anya omume gị.
Ihe ọzọ dị mma na InteliiJ IDEA bụ njikwa nchekwa ncheta. Onye a na-akpọ "onye nchịkọta ihe mkpofu" na-enyocha ebe nchekwa a na-etinye na usoro ihe omume ahụ, mgbe ọ na-adịkwaghị mkpa, onye nchịkọta na-agbagha ya.
Mana ihe niile nwere ihe ọghọm. Uzo di mgbagwoju anya bu otu n'ime nsogbu nke ndi nkiti novice chere. O dokwara anya na ebe dị ike dị otú ahụ nwere usoro ihe dị elu maka usoro imezi ihe.
Ihe omumu: Otu esi ede usoro Java site na iji IntelliJ IDEA
Ọtụtụ mgbe, a na-eji Eclipse rụọ ọrụ na asụsụ mmemme Java, ma ọ kwadoro ọrụ na asụsụ ndị ọzọ. Nke a bụ otu n'ime ndị isi asọmpi nke IntelliJ IDEA. Ihe dị iche n'etiti Eclipse na mmemme yiri nke ahụ bụ na ị nwere ike iwunye ya tinye-ons dị iche iche na ị nwere ike ịhazi ya n'ụzọ zuru ezu.
Eclipse nwekwara nnukwu mgbakọ na igbu ọsọ ọsọ. Ị nwere ike ịme ihe ọ bụla e kere na gburugburu ebe a na sistemụ ọ bụla, ebe Java bụ asụsụ cross-platform.
Mgbanwe nke Eclipse si IntelliJ IDEA - interface. Na Eclipse, ọ dị mfe ma ghọtakwuo, nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka ndị na-amalite.
Ma, dịkwa ka IDE niile maka Java, Eclipse ka nwere usoro nke ya, yabụ ọ gaghị arụ ọrụ na kọmputa ọ bụla. Ọ bụ ezie na ihe ndị a adịghị elu.
Enweghị ike ikwu na usoro mmemme maka ịmepụta ihe omume kachasị mma. Ị ga-ahọrọ asụsụ wee nwalee ọ bụla Wednesday maka ya. E kwuwerị, IDE ọ bụla dị iche ma nwee àgwà nke ya. Ònye maara onye ị kacha achọ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ike mbanye 2019